Midowga Yurub oo dhaqale ku taageraya dib usoo celinta dhaqaalaha Soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska midowga Yurub ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in Midowga Yurub (EU) ay bixineyso dhaqale lacageed oo gaaraya 13.4 million U.S. dollar,taasoo ay shegeen in ay doonayaan in wax loogu qabto dib usoo celinta dhaqaalaha dadweynaha,wadama geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Madaxa wufuuda Midowga Yurub ee Soomaaliya Michele Cervone d’Urso ayaa sheegay dib usoo celinta dhaqaalaha dadweynaha ay dib usoo kabasho ay ku sameyn doonto adkeynta nabada wadanka Soomaaliya.
“Tani waa mudnaanta Midowga Yurub. oo ay maamulaan Bangiga Adduunka, waa furaha in ay horumar ka sameyneyso yoolkan. Multi Partner Fund, waana waxyaabaha loo baahanyahay in doorka xoogan la saaro ayuu yiri madaxda wafuuda Midowga Yurub,ee Somalia Michele Cervone d’Urso.
Wadamada geeska Afrika iyo midowga Yurub,ay sannadkii hore saxiixdeen barnaamij loogu magacdaray Compact Somali , kaasoo aha dib usoo celinta dhaqaalaha dalka Somalia,iyo wadamada geeska adrica,kaasoo caawinaya dib udhiska dalka soomaaliya.
Hogaamiye katirsanaa Al-Shabaab oo laga qaaday Cunaqabateyn saarneed iyo Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay